Faah faahin:- Qaraxa lala eegtay Guddoomiyaha degmada Yaaqshiid - Awdinle Online
Qaraxaan oo ahaa miinada nooca dhulka lagu Aaso ayaa gaari ay als ocdeen guddoomiyaha degmada Yaaqshiid Axmed Cabdullaahi Cariif & Saraakiil ciidan waxaa lagula eegtay Xaafada Daaru-salaam ee degmadaasi Yaaqshiid.
Wararka ayaa waxaa ay sheegayaan in qaraxa Miino uu ka badbaadeen Guddoomiyaha degmada Yaaqshiid, saraakiisha iyo Askarta la socotay, isla markaana aysan jirin khasaaro ka dhashay qaraxa.
Gudoomiyaha degmada Yaaqshiid Axmed Cabdullaahi Cariif ayaa qaraxa la kulmay markii ay ka soo noqdeen Aaska AUN Aabaha Taliyaha Saldhiga booliska degmada yaqshiid oo ku geyriyooday Xaafada Ratiweyne.
Waa markii 3aad oo uu la kulmayo qarax Miino Gudoomiyah Degmada yaqshiid, iyad aoo dhowr jeer meelo kamid ah Magaalada mqudisho qarax lala eegtay gaarigiisa, balse uu ka badbaaday.
Waa qarixii labaad oo Maanta ka dhacay Magaalada mqudisho, waxaana kan kii ka horeeyay uu ka dhacay agagaarka Dugsiga Hoyga Xamar oo u dhow Madaxtooyadii hore ee Cabdiqaasim, waxaana lala eegtay Taliye kuxigeenka Ciidanka xoogga dalka, iyada oo ay dhimasho & dhaawac ku noqdeen askar & dad Shacab ah.
Previous articleDEG DEG:- Qarax Muqdisho lagula eegtay Guddoomiye degmo